Raging Turkey Wildfires Trigger Tourist Evacuation na mpaghara ezumike Antalya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Turkey na -agbasa News » Raging Turkey Wildfires Trigger Tourist Evacuation na mpaghara ezumike Antalya
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News • Akụkọ dị iche iche
Ọkụ ọkụ na-ere ọkụ na Turkey na-ebute mbupụ ndị njem na Bodrum na Marmaris
Mpaghara Antalya na ebe ntụrụndụ osimiri a ma ama na -eyi egwu na -etinye ndị ọbịa na ndị bi na mpaghara ntụrụndụ na Southern Turkey n'ihe egwu.
Ọkụ kacha njọ na Bodrum na Marmaris, Turkey
E nyere iwu ka a kpọpụ ndị mmadụ n'obodo mepere emepe nke Turkey nke Bodrum na Marmaris.
Ọkụ ndị ahụ na -agba nnọọ nso ụlọ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ.
Ndị agha mmiri mmiri nke Turkey na -ekere òkè n'ọgụ ọkụ na -agba n'ọhịa.
Ọkụ na -enwu ọkụ nke Turkey rutere n'obodo Marmaris na -eme njem na Bodrum. Ndị ọchịchị obodo nyere iwu ka a kpọpụ ndị njem na ndị bi ebe ahụ.
Ọkụ ahụ pụtara na mbụ na mpaghara ebe mmadụ na -ebikarị ihe dị ka kilomita 75 (kilomita 45) n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Antalya, bụ obodo ama ama ama ama ama ama nke ndị Russia na ndị njem ọwụwa anyanwụ Europe ndị ọzọ na -ewu ewu, kamakwa ndị Germany.
Mana ha na -agbada nso na Thursday n'akụkụ osimiri nwere aja jupụtara na họtel na ebe ntụrụndụ.
Ihe onyonyo na soshal midia na telivishọn Turkey gosiri ka ndị bi na-awụlikwa n'ụgbọ ala ha na-agba ọsọ maka ndụ ha n'okporo ụzọ juputara n'anwụrụ ọkụ nke ọkụ oroma na-enwu.
N'ihi oke ọkụ siri ike, a bupụrụ ndị mmadụ na Marmaris.
Ọhịa na -ere ọkụ na nso ụlọ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ.
Ụfọdụ ndị njem na -anọgide na -egwu bọl n'akụkụ osimiri, n'agbanyeghị ọkụ ọgbụgba
Onye minista na -ahụ maka ọrụ ugbo na oke ọhịa Turkey Bekir Pakdemirli kwuru na helikọpta ise, otu ụgbọ elu, na igwe ọkụ ọkụ 30 na -alụ ọgụ n'ọkụ na -ebibi ihe.
A na -ahụ ọkụ kacha ọhụrụ n'obodo ezumike Bodrum. A na -akpọpụ ndị mmadụ. Ngalaba nke ndị agha mmiri nke Turkey na -etinye aka na mbo siri ike iji kwado ọkụ ahụ.
Ọkụ ndị dị ugbu a, nke siri ike n'afọ ndị na -adịbeghị anya, malitere n'ihi oke okpomọkụ na mpaghara ahụ. Ka ọ dị ugbu a, mmadụ anọ anwụọla na ọdachi ahụ ebe anwụrụ ọkụ anwụrụla mmadụ 183.
Na mbu, Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Turkey Mehmet Nuri Ersoy kwuru na ọkụ na -agbapụ na họtel na ụlọ.
Onye ozi ahụ kwuru, sị: “Ebe ọ bụ na a na -etinye aka na oge yana iji nnukwu akụrụngwa, a na -egbochi mgbasa ọkụ na -aga n'ụsọ oké osimiri. Mgbe e mesịrị, emechiri ụzọ ndị na -aga ebe ndị njem. ”
taa, Bodrum bụ otu n'ime ebe azụmaahịa, nka na ihe ntụrụndụ kacha mkpa dịka ọ dịla kemgbe ọtụtụ narị afọ gara aga… soro ya biri ya.